Belgium oo Durduro Ku Dhaafay Algeria
HomeWararka MaantaBelgium oo Durduro Ku Dhaafay Algeria
Xulka Belgium ayaa ku garaacay qaranka Algeria 2-1 kulankii furitaanka Group-ka H, walow ay ciyaartu ku adkayd kooxda reer Yurub oo looga baahday inay iska soo bedaan goolka lagaga naxsaday.
Khaladkii uu sameeyey laacibka difaaca ee Jan Vertonghen ee uu goolka u bedelay weeraryahan Sofiane Feghouli ayaa gaysiiyey qaranka Afrikaanka ah inay fursad hogaanka ay ku qabtaan hellaan.
Marc Wilmots, tababaraha xulka Belgian , ayaa kaga jawaabay bedel saddex ciyaaryahan ah oo uu 20 daqiiqo gudohood ku soo tuuray qaybtii dambe ee ciyaarta—kuwaas oo laba kamid ahi ahaayeen kuwa keenay guusha.
Marouane Fellaini ayaa kubad madax ah ku barbareeyey goolkii Algeria , ka hor intii aanu Dries Mertens kubad uu counter attack ahayd oo uu ka hellay laacibka kooxda Chelsea ee Hazard ku shubin goolka guusha.
Korea Republic iyo Russia oo ah labada qaran ee ku wehelinaya Group H xulalkan Belgium iyo Algeria ayaa iyaguna ah awood adag oo looga baqayo inay waxba kama jiraan ka dhigaan Guusha Belgiumku ka gaadhay Algeria.
Guardiola: Muranka Robben Waxa Igaga Daran Ka Ay Xaaskaygu Igala Hortimaado
Iran Bus bay goolka hordhigteen- Mikel
Xulka Germany Oo Kala Jabiyey Koobkii Aduunka